Danjiraha Mareykanka ee Soomaaliya oo kulan la qaatay laba ka mid ah Musharrixiinta Galmudug – Geelle Mag
Danjiraha dalka Mareykanka u fadhiya Soomaaliya Amb. Donald Yamamota ayaa Maanta waxa uu Magaalada Muqdisho kula kulmay laba ka mid ah Musharrixiinta Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Galmudug, kuwaas oo kala ah Xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen (Odowaa) oo ka tirsan Xildhibaannada Golaha Shacabka iyo Kamaal Daahir Xasan (Guutaale) oo ka mid ah Madaxda Xisbiga Wadajir.
Qoraal lagu baahiyay barta twitter-ka ee Safaarada dalka Mareykanka uu ku leeyahay Muqdisho ayaa waxaa lagu sheegay in kulanka ay uga wada hadleen baahida loo qabo in si hufan oo cad ay u dhacdo doorashada Maamulka Galmudug.
“Hay’ado dowladeed oo adag oo adkeysi badan waxa ay wax ka qaban karaan dhibaatooyinka bani’aadanimo, kana adkaan karaan Argagaxisada iyo abuuritaanka nabad, xasilooni iyo barwaaqo” ayaa lagu yiri Qoraal kasoo baxay Safaaradda Mareykanka.
Kulanka Maanta dhex-maray Safiirka dalka Mareykanka u fadhiya Soomaaliya Amb. Donald Yamamota iyo Musharrixiinta Maamulka Galmudug ee Cabdiraxmaan Odowaa iyo Kamaal Guutaale ayaa waxa ay kusoo aadaysaa xilli hoggaanka Ahlusunna ay walaac ka qabaan hanaanka doorashada Maamulka Galmudug.
Sidoo kale Safiirka Mareykanka u fadhiya Soomaaliya Amb. Donald Yamamota ayaa shalay waxa uu Magaalada Muqdisho kulan kula qaatay Madaxda Madasha Xisbiyada Qaran, isaga oo kala hadlay sida ugu wanaagsan ay ku dhici karto doorashada soo socota ee Soomaaliya.